धर्म, कांग्रेस र संस्कार – MeroJilla.com
धर्म, कांग्रेस र संस्कार
नेपाली काँग्रेसभित्र धर्म संस्कृतिको बहस पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालमा ८१ प्रतिशत बढी नेपालीहरु हिन्दू धर्मावलम्बी भए पनि राजनीतिक धृष्टताका कारण मुलुकलाई एकाएक धर्म निरपेक्ष बनाइयो ।
दलका नेताहरुले कहीं कतैबाट दवाव प्रभाव परेकै कारण मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाए । विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको नाम पाएको नेपाल एकाएक निरपेक्षमा परिणत भयो ।
यति ठूलो विषयमा निर्णय लिनुअघि नेताहरु जनमत संग्रह गर्न सक्थे भन्ने बहस यद्यपि छ ।
धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्दा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालीन सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला रहेका थिए ।
एकाएक धर्म निरपेक्ष भएपछि काँग्रेसभित्र पनि चर्को बहस भयो । नेताहरु विभाजित हुन थाले । तर गिरिजाप्रसाद जिवित हुन्जेल खुलेर विरोध गर्न सकेनन् ।
गिरिजाबाबु स्वर्गेवास भएसंगै सुस्त गतिमा सुनिने स्वरहरु चर्किला हुन थाले । खुमबहादुर खड्काले त पार्टीको एजेन्डा नै मुलुकलाई फेरि हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने भने ।
खड्का पनि रहेनन् । उनको निधनपछि पनि यो मुद्दा रोकिएको छैन । काँग्रेसको महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर क्याम्पेन नै चल्यो ।
त्यो हस्ताक्षर क्याम्पेन दस्तावेजका रुपमा लिपिवद्ध हुन नसके पनि नेपालको इतिहास हिन्दू धर्मसंग जोडिएको बताउन नेताहरु चुक्दैनन् ।
पछिल्लो समय काँग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइराला हिन्दूधर्मका लागि बढी नै सक्रिय देखिएका छन् ।
कोइराला भाइको यो हिन्दूअतिवादिता भने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पटक्कै मन परेको छैन ।
सम्भवतः यसै कारणले होला देउवाले चैत २ गते कोइराला परिवारका लागि तीतो कुरा गरिदिए । पाल्पामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालाई धर्म निरपेक्ष बनाउँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेकाले शेखर र शशांकले हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा बोलेर केही नहुने बताए ।
देउवाले संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यसैलाई नै काँग्रेसले मान्ने बताएका छन् । अर्थात् देउवाले गल्ती गरिएको भन्न सकेनन् । सम्भवतः उनी पनि निरपेक्षकै पक्षमा रहेको यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सभापतिज्यूको संस्कारले दियो होला मेरो संस्कारले दिन्न – डा शेखर कोइराला
डा शेखर कोइरालाले आफ्नो मनको कुरा गरेका हुन् । जनताका कुरा गरेका हुन् । मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाएर फाइदा कसलाई भएको छ ?
यसको जानकारी डा कोइरालालाई पनि छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले डा कोइरालाद्धयलाई अब केही नहुने भन्दै खुलेआम बोल्नु पक्कै जायज होइन होला ।
किनकि वाक्स्वतन्त्रता लोकतन्त्रमा अपरिहार्य छ । विचारको स्वतन्त्रता छ । डा शेखर कोइरालाले धर्मका बारेमा बोलेका कुरालाई पार्टी सभापति देउवाले खण्डन गरेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, ‘उहाँ मेरो आदरणीय सभापति हो । उहाँले किन त्यस्तो बोल्नु भयो त्यो उहाँलाई सोध्दा राम्रो होला ।’
डा कोइरालाले सभापतिका बारेमा प्रतिक्रिया माग्दा भने, ‘सभापतिज्यूको संस्कारले दियो होला मेरो संस्कारले दिन्न ।’
उनले थपे, ‘मलाई मेरो राजनीतिक संस्कारले जे पायो त्यही बोल्न दिँदैन । म यतिमात्र भनूँ ।’
उनले देउवासंग आफैले सोधेर जानकारी लेलान् त ? भन्ने प्रश्नमा उनले सहजै भने, ‘हेर्नुस् म त यस्ता कुरामा विवादमा पर्न चाहन्न । म केही पनि सोध्दिन । मेरो संस्कारले मलाई सोध्न दिँदैन ।’
धर्मको विचार भने पेचिलो बन्दै गएको छ । डा कोइरालाले पार्टीभित्र निर्वाचनपछिको तिक्तता पार्टी सभापतिले मेट्न सक्नुपर्नेमा भने जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘सभापति शेरबहादुरजीले मिलाउनु हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर उहाँले मेट्न सक्नु भएको छैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘तिक्तता मेट्न सकिएन भने एकढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यो सभापतिको दायित्व हो ।’